Jaguar ရဲ့ I-Pace နဲ့ မိမိရဲ့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ‘Baby Driver’ Star တစ်ဉီး – AutoMyanmar
‘Baby Driver’ ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hollywood သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ဉီးဖြစ်သူ Ansel Elgort ဆိုသူကတော့ Jaguar ရဲ့ SUV အမျိုးအစား Electric Vehicle ဖြစ်တဲ့ I-Pace ကို တက်မောင်းပြီး သူ့ရဲ့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှုကို စမ်းသပ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြေညီအတားအဆီးကင်းမဲ့နေတဲ့ လမ်းမှာတောင်မဟုတ်ပဲ “Smart Cone Challenge” မှာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Brooklyn (Cap ရဲ့မွေးရပ်မြေလေး 😄) မှာရှိတဲ့ Seret Studios မှာပါ။ Ansel Elgort ရဲ့ ကားမောင်းစကေးတွေကိုတော့ အောက်ကဗီဒီယိုကနေ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Ansel Elgort ရဲ့ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှု စကေးတွေကတော့ “Baby Driver” ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်နေရသလိုပဲနော်.. ဟုတ်တယ်မလား ?
I-Pace ကိုလည်းမောင်းပြီးရော Ansel က
“ကျွန်တော် သွားနှုန်းလျှင်မြန်တဲ့ကားတွေ ရှုတင်မှာမောင်းဖူးပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အခုလိုပုံစံမျိုးတော့ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသေးဘူးဗျ.. အမြန်နှုန်းကတော့ ကျွန်တော်ကားရဲ့ စတီယာကို စပြီးကိုင်လိုက်ချိန် ကျွန်တော်တောင်မသိလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာ ကားကကျွန်တော့်ကို ခေါ်သွားတော့တာပဲ.. Smart Cones လေးဟာ စစချင်းမှာ ရိုးရှင်းလှတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်မောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ထပ်ဘယ်ကိုဆက်သွားရမလဲဆိုတာကိုတောင် ခန့်မှန်းဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ဗျ… ပြောရရင်တော့ ဒီကားလေးကိုမောင်းရတာကြိုက်တယ်ဗျာ။”
Jaguar I-Pace EV ကိုတော့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမယ့် New York International Auto Show မှာစတင်မိတ်ဆက်ပြသသွားမှာပါ။ (Ansel ဆိုတဲ့ဘဲလေးကတော့ ကံကောင်းချက် 😆).. I-Pace ဟာ All-Wheel Drive ဖြစ်ပြီး 4.5 စက္ကန့်မှာ 0-60 mph အထိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲက I-Pace ကို Ansel အရှိန်မြန်မြန်မောင်းပြီးထိန်းကျောင်းသွားနိုင်ပုံကို ကြည့်ပြီး i-Pace ရဲ့ အရှိန်နဲ့ Control system ကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။
Zero-emission vehicle ဖြစ်ပြီး အားသွင်းတဲ့အခါအချိန်အနည်းငယ်သာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲ Jaguar ရဲ့ Chief Engineer တစ်ဉီးကပြောကြားထားပါသေးတယ်။ အရှိန်နဲ့ Control System ကလည်းကောင်း၊ SUV အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် နေရထိုင်ရကျယ်ဝန်းပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိ၊ EV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီကိုလည်း ခဏလေးပဲသွင်းရ တာကြောင့်…. Automyanmar ကတော့ YES ပါပဲ. 🤣)